မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ စာချုပ် ဖြင့်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်အမျိုုးအစား ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ | MyJobs
မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ စာချုပ် ဖြင့်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်အမျိုုးအစား ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ
Organizational Development and Monitoring Advisor(VSO)
The Organizational Development & Monitoring Advisor will be based in Yangon, work closely with programme teams, provide technical support and trainings to partner organizations.
The Organizational Development & Monitoring Advisor will be based in Yangon, work closely with ...
Directly reports to: Conservation Director, WWF-Myanmar Supervises: N/A Location: Yangon, Myanmar/flexible
Directly reports to: Conservation Director, WWF-Myanmar Supervises: N/A Location: Yangon, Myan ...
ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ စာချုပ် ဖြင့်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်အမျိုုးအစား ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။